I-10 ye-Undergraduate Scholarships kubafundi bamazwe ngamazwe eCanada 2022
I-10 ye-Undergraduate Scholarships kubafundi bamazwe ngamazwe eCanada
Olu luluhlu lwee-10 eziphambili ze-undergraduate scholarships kubafundi bamazwe ngamazwe eCanada njengoko kubhalwe ngu StudyAroadNations.
Ukuba uya kuvumelana nam, iCanada lolunye lolona hlobo luhlobo emva kokuya kwindawo yokufunda kwabafundi bamanye amazwe kwaye ngenxa yoku, kukho ukhuphiswano oluninzi ekufumaneni ukwamkelwa kufunda eCanada nokuba kungoku scholarship or Ukuzixhasa.
Kungenxa yale nto bendihlala ndithetha ngeCanada; Ndizama konke okusemandleni am ukuqinisekisa ukuba nonke nifumana ukufikelela kwezona nyaniso zibalulekileyo malunga neCanada kunye nokufunda eCanada. Kuninzi lwabafundi bam apha luxhomekeke kwizifundi zokufezekisa Funda kwelinye ilizwe amaphupha, kusekho abambalwa abazimisele ukuzixhasa ngeziqu zabo kwaye kungenxa yabo siye sabhala izikhokelo ezinje Ufunda njani kwaye usebenze eCanada kwaye Uluhlu lweeNyuvesi eziPhantsi eCanada kunye nendlela yokufaka isicelo.
Kwabo bajongene nemiceli mngeni ngokubhekisele kwi-IELTS, ndikwapapashe isikhokelo kutshanje indlela yokufunda eCanada ngaphandle kwe-IELTS kodwa apha, ndifuna ukudwelisa ezona zifundo zibalaseleyo zabafundi bamanye amazwe eCanada, ubuncinci, ishumi kubo.
Uya kulifumana eli nqaku linomdla kwaye liluncedo ukuba uzimisele ngokwenene ekufezekiseni iphupha lakho phesheya.
I-Fairleigh Dickinson Scholarships kubaFundi beZizwe
I-Simon Fraser Yunivesithi Yoncedo lwezeMali kunye neeMali
I-Queen's University International Scholarships
IYunivesithi yaseNtshonalanga yeeNyuvesi yaseNtshona Koloni
U-Lester B. Pearson Scholarship wamanye amazwe
IYunivesithi yaseYork University International Scholarship Programme
I-University of Carleton I-Scholarships kubafundi beZizwe ngezizwe
IYunivesithi yaseBritish Columbia Iingcali zoBafundi beZizwe ngezizwe
I-Humber College International Entrance Scholarships
Ukufundiswa kwabafundi belizwe langoku kunye nabasekhaya belizwe / abafundi basekhaya kuwo onke amanqanaba, bafunda kwiYunivesithi yaseDalhousie eHalifax.
Ukufundiswa kwabafundi bamazwe ngamazwe kuwo onke amanqanaba, ukwenza isifundo eCanada kwiYunivesithi yaseFairleigh Dickinson eVancouver. Unokufaka nje isicelo sokwamkelwa eyunivesithi yaseDickinson emva koko xa wamkelwe, ungaqhubeka ufake isicelo sobufundi.
Vula abafundi basekhaya nakwamanye amazwe abafunda ngoku okanye abacwangcisela ukufunda kwiYunivesithi yaseSimon Fraser.
Vula abafundi bamanye amazwe ukuba bafunde eCanada kwiDyunivesithi yaseKumkanikazi e-Kingston, Ontario.
Amanye amabhaso avuleleke kuphela kubafundi abavela e-India, ePakistan nase-US kodwa kungenjalo, abanye babo bavulelekile kubafundi bamanye amazwe abavela kwihlabathi liphela.
Kukho ezahlukeneyo Izifundo zaseKhanada ezinikezelwa kubafundi bamanye amazwe abenza isifundo kwiDyunivesithi yaseNtshona Ontario.
U-Wehave uthumele izifundi ezininzi ze-Ontario apha kwaye ungazifumana usebenzisa ibhokisi yokukhangela kwindawo yethu.
Inkqubo yeLester B. Pearson yaBafundi beZizwe ngeZizwe kwiYunivesithi yaseToronto njengenye yezona zifundo zibalaseleyo zokufunda kwabafundi bamazwe aphesheya e-canada yenzelwe ukwamkela abafundi bamanye amazwe ababonisa impumelelo kwezemfundo kunye nobuchule kwaye bayaziwa njengeenkokheli kwisikolo sabo.
I-scholarship iya kubandakanya izifundo, iincwadi, iifizi ezifunekayo, kunye nenkxaso epheleleyo yokuhlala iminyaka emine.
Abafundi bamanye amazwe abanazo irekhodi eligqwesileyo lemfundo kwaye yamkelwe kwiYunivesithi yaseYork banelungelo lokufumana izifundi ezixabisa i-60,000- $ 100,000 yenkqubo yesidanga seminyaka emine.
UCarleton ubonelela ngezifundo ezithile ezixabisa i-4,000- $ 16,000 kubafundi abangumzekelo abafezekisa iikhrayitheriya zokungeniswa kwe-80% nangaphezulu.
I-UBC njengenye yezona zifundo zibalaseleyo zokufunda kwabafundi bamazwe aphesheya e-canada ibona impumelelo yabafundi abavela kwihlabathi liphela ngokunikela ngaphezulu kwe- $ 10 yezigidi ze-CAD rhoqo ngonyaka amabhaso, izifundiswa kunye nezinye iindlela zoncedo lwezezimali zabafundi bamazwe aphesheya.
Ukubonelela ngezibonelelo ezihlaziyiweyo ezihlaziyiweyo kunye nabafundi be-NEW International abafundi baqala izifundo zabo ngoSeptemba noJanuwari kunyaka ngamnye.
Ukuba ucwangcise nzulu ukufunda eCanada, enye yezona mfundo zibalaseleyo zokufunda kwabafundi bamanye amazwe eCanada kufuneka bakuthandele.
Qonda into oyifunayo kwaye uyenzele yona. StudyAroadNations ndiya kuhlala ndilapha ukukukhokela.
Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship Ngaphantsi kweeSchoolships
ziyafumaneka kwizidanga zokuqala eCanadaIzifundo eziphambili zesidanga sokuqala sabafundi bamanye amazwe eCanadaIzifundo eziphambili zesidanga sokuqala eCanadaIzifundo zamanye amazwe eCanadaizifundi eCanadaizifundi eCanada zabafundi bamanye amazwefunda kunye nokufunda eCanadakwizifundi eCanada
Post Previous:Amazwe aphezulu ayi-10 aKhathalelo lwezeMpilo kwaSimahla kuye wonke umntu kubandakanya aBafundi
Okulandelayo Post:Iiyunivesithi eziphezulu ze-10 zamkela i-IELTS Amanqaku 6 eCanada nase-Australia
Joel Chamona Lunga Freitas Costa uthi:
Novemba 27, 2021 kwi-11: 55 pm
Mais não vi a ficha de inscrição para njenge mesmas universidade
Pingback: Izikolo eziBalaseleyo zoBunjineli ze5 eCanada ngeeScholarship
Pingback: IiKholeji ezili-10 eziGqwesileyo kwi-Intanethi ezamkela iFafsa
Pingback: I-27 iiyunivesithi eziPhezulu eCanada ngeeScholarships
UMelvin Meakemie uthi:
Meyi 20, 2021 kwi-8: 39
Ndinomdla kwisifundi sokuqala, ndingasifaka njani isicelo sale nto
Meyi 18, 2021 kwi-8: 36 pm
Nceda abantu mabandincede
Ndiyasithanda isikolo phesheya kodwa andinamali
Ndicela undifumanele isifundi
Ogunyemi Ilesanmi Yinka uthi:
February 24, 2021 kwi 1: 49 am
Ndilonwabele kakhulu eli nqaku kuba landifundisa ukuba ndifunde eCanada ngaphandle koxinzelelo.
Agasti 23, 2020 kwi-7: 38 am
Ndifuna ukufunda eCanada.
Ndingayifumana njani inkululeko ye-sc …….
January 6, 2020 kwi 10: 33 am
singazenza njani ezi zonxibelelwano ukuba zisebenzise?
January 5, 2022 apha 9: 48 pm
Ngaba unomdla kumanqaku akho okufunda kwizifundo zobhaliso kunye nee-bourses kunye nokwamkelwa ngaphandle kwamahhala.
Disemba 25, 2019 kwi-8: 40 am
Ndifuna ukufunda eCanada
UJohn princess uthi:
Novemba 19, 2019 kwi-2: 56 pm
Ndingathanda ukufaka isicelo sir ndilungile
Disemba 2, 2019 kwi-4: 13 pm
UAsante Michael uthi:
Oktobha 29, 2019 kwi-9: 16 am
Ndiya kuvuya kakhulu ukuba nale mfundo
Novemba 4, 2019 kwi-5: 05 pm